About Us - Qingdao Renergy Equipment Co., Ltd
RW-5KW miova dity
RW-10KW miova dity
RW-20KW miova dity
RW-30KW miova dity
LED masoandro eny an-dalana mazava
LED tontolo masoandro mazava
LED masoandro Lawn mazava
LED High Bay fahazavana
Tovana LED fahazavana
LED Grow fahazavana
Wind masoandro mifangaro fahazavana eny an-dalana
5kw ao amin'ny rafi-masoandro-Grid
5kw eny-Grid rafi-masoandro
10kw ao amin'ny rafi-masoandro-Grid
10kw eny-Grid rafi-masoandro
Qingdao Renergy Equipment Co., Ltd., any Qingdao, Sina, dia Hi-teknolojia orinasa mirotsaka amin'ny fikarohana, fanamboarana, ny varotra sy ny ara-teknika Consulting ny madinika sy ny fitaovana vaovao taranaka angovo herinaratra rafitra sy hery fiarovana rafitra. Amin'ny mafy R & D fahaizany, ny rafitra fanaraha-maso henjana tsara, Renergy dia afaka manome angovo vaovao feno fanohanana teknolojia fanompoana ho an'ny mpanjifa.
Mpandray entana: madinika sy salantsalany rivotra turbine rafitra eo ambany 100kw; -masoandro ny Grid sy ny rafitra eny Grid, tafo rafi-masoandro fampiasam-bola sy ny fanorenana; masoandro rivotra eny an-dalana mazava, masoandro ny mazava ho zaridaina, LED mitombo hazavana, LED helo-drano avo fahazavana, hazavana LED tionelina, LED eny an-dalana mazava, orinasa fahazavana angovo fahavaratra fanavaozana sy hery fiarovana fanavaozana.
Renergy manana fototra angovo vaovao ny teknolojia ao amin'ny orinasa. Hanorin-miova ny teknolojia ho an'ny madinika sy salantsalany haben'ny rivotra turbine afaka mamaha olana ny fiarovana amin'ny rivotra turbine asa. Miova dity ny fiara, ABS fiarovana rafitra, rafitra fanaraha-maso manan-tsaina, sy ny fanaraha-maso lavitra sehatra fiarovana manome fiarovana ho an'ny rivotra toby hazakazaka.
RENERGY orinasa no tena mandroso sy tena mandroso gropy fitsapana sehatra, rivotra Fanodina rafitra mandanjalanja, miova hanorin-fitiliana sehatra, dia naka fanahy reraka hery laboratoara sy ny rivotra samihafa turbine mamantatra fitaovana manokana; orinasa manana ny fahaizany fanaterana 100sets-drivotra turbine isam-bolana.
Wind turbine rafitra dia ahitana ny rivotra turbine, tilikambo, ny Grid-maso sy ny inverter, fa dingana tokana na dingana telo Grid fifandraisana. Renergy rivotra turbine dia afaka ny mifanaraka amin'ny amin'ny Grid inverters avy ABB, EL hery sy ny hafa marika malaza ao Shina sy tany ivelany.
RENERGY rivotra turbines tena malaza tany Alemaina, Danemark sy ireo firenena Eoropeana; ny fampisehoana efa fankatoavana noho ny mpiasa sy ny mpanjifa. Wind turbine rafitra efa niaina hafainganam-pandehan'ny rivotra tena ny 45m / s any Danemark.
Wind turbine rafitra dia mety ho an'ny toeram-piompiana, tokantrano, toerana fandraharahana madinika, fifandraisana toerana.
Mandray amim-pitiavana ny mpanjifa sy ny namany avy amin'ny manerana izao tontolo izao mba hitsidika sy hifampiraharaha raharaham-barotra. Aoka isika hiara-hiasa ho an'ny soa ny Atrik'asa Fifanakalozana.